शुभ हुँदैछ कि अशुभ भन्ने थाहा पाउने संकेतहरू – Jagaran Nepal
शुभ हुँदैछ कि अशुभ भन्ने थाहा पाउने संकेतहरू
विभिन्न संकेतबाट शुभ हुँदैछ कि अशुभ भन्ने थाहा पाउन शास्त्रिय मान्यता छ । यस्ता संकेतले भविष्यमा हुने घटनाले तपाईंलाई राम्रो गर्छन् कि नराम्रो भन्ने थाहा दिन्छन् । शास्त्रमा शुभ र अशुभ संकेतहरुको चर्चा गरिएको छ । जसमध्य केही शास्त्रीय संकेत यस्ता छन् ।
१. सपनामा कुनै निर्दोष ब्यक्तिले मुद्धाबाट सफाइ पाएको देख्नु भो भने धन प्राप्त हुन सक्छ । सपनामा तपाईंको छातीमा कसैले चलाएको वा कन्याएको देख्नुभयो भने धन हात लाग्ने संकेत हो ।२. विहीबारको दिन कुमारी कन्या पहेंलो बस्त्रमा देख्नु भो भने तपाईंलाई धन लाभ हुन सक्छ ।३. यदि कतै जाँदा सुन्दर स्त्री बाटोमा देख्नु भो भने पनि धनलाभ हुने सम्भावना हुन्छ ।
यदी पैसा हातबाट खस्यो भने तपाईंलाई धनलाभ हुन सक्छ ।४. यदि तपाईंको दायाँ हातको हत्केला चिलायो भने बुझ्नुस् तपाईंलाई धन हात पर्दैछ ।५.यदि सपनामा मोती, मुङ्गा, हार जस्ता गहना देख्नु भो भने घरमा लक्ष्मीको बास हुन्छ ।
६. पैसाको कारोवार गर्न जान लाग्दा कपडा लगाउने समयमा खल्तीबाट पैसा खस्यो भने पनि राम्रो संकेत हो ।७. विहान उठ्ने वित्तिकै ढोकामा भिखारी माग्न आएको छ भने तपाईंको माग्नु पर्ने पैसा नमागी उठ्छ ।८ .सपनामा कट्टु लगाएर कपडामा टाँक लगाएको देख्नु भो भने धन मात्र होइन सम्मान समेत मिल्न सक्छ ।
९. कतै जाँदा लोखर्केले बाटो काट्यो भने पैसा हात पर्न सक्छ ।१०. सपनामा फूल नास गरेको देख्नु भो भने यसले पनि धन प्राप्तिको संकेत गर्छ ।११.सपनामा मुत्र, वीर्य, वा दिशा सेवन गरेको देख्छ उसलाई पनि धन प्राप्ति हुन सक्छ ।